Adama Barrow oo Senegal sii joogi doona - BBC Somali
Adama Barrow oo Senegal sii joogi doona
Image caption Adama Barrow, madaxweynaha la doortay ee Gambia
Wararka ka imanaya dalka Senegal ayaa sheegaya in madaxweynaha la doortay ee dlka Gambia, Adama Barrow, uu joogi doono dalka Senegal ilaa inta laga gaarayo waqtiga caleema saarkiisa, xilli dhibaato siyaasadeed ay dalkaasi Gambia ka taagan tahay.
Wakaaladda wararka Senegal ee APS ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Macky Sall uu ogolaaday inuu martigaliyo Mr Barrow caasimadda dalkaas ee Dakar ilaa laga dhaarinayo 19-ka bisha Janaayo.
Madaxweynhaa haatan xilka haya, Yaxya Jammeh, ayaa diiday inuu aqbalo natiijada doorashadii Diseembar ee loogaga guulaystay.
Sabtidii ayuu madaxweynaha Mali, Ibrahim Boubacar Keita, waxa uu ugu baaqay Mr Jammeh inuu xafiiska banneeyo si looga hortago inuu dhiig daato.
Waxa uu Ibrahim Boubacar ka hadlayay gebagabada shirkii madaxda Afrika iyo Faransiiska ee lagu qabtay caasimadda Mali ee Bamako, shirkaasi oo si weyn loogaga hadlay dhibaatada ka taagan waddanka Gambia.